Na teo amin'ny orinasa nandritra ny folo taona mahery ianao na hanomboka ny tenanao, ny fananana fanatanterahana an-tserasera mafy ho an'ny marika dia tsy mifanakalo hevitra. Tahaka ny anananao birao sy morte ho an'ny orinasanao amin'ny Internet, dia tsy maintsy manana fisehoana an-tserasera ianao izay afaka miditra amin'ny marika anao. Ary ny hany fomba ahafahanao manintona sy mankafy ary mampitombo ny tranokalan'ny mpanjifanao amin'ny Internet dia ny fananana tranonkala mahasarika sy malefaka. Soa ihany, nahafahanao namoaka io ampahany manan-danja amin'ny orinasanao io amin'ny ekipa matihanina azo atokisana sy azo itokisana ao amin'ny Semalt.
Ny analytics tranonkala dia ny fandrefesana sy ny fandalinana ny angon-drakitra mifandraika fotsiny mba hahatakarana ny toetran'ny mpitsidika ny tranokalanao. Amin'ny alàlan'ny angon-drakitra mety, dia afaka mandray fanapahan-kevitra tsara ianao ary manapa-kevitra momba izay ho avy amin'ny mpihaino anao. Ary koa, rehefa mitam-piadiana amin'ireto data ireto ianao dia afaka mikasa sy mamorona votoaty mahasoa kokoa ho an'ireo mpitsidika anao, ary ho lasa mpanjifa mahatoky ho an'ny marika ianao.
Tokony ho voamarikao ny angon-droa ilainao handrefesana sy hamakafaka ny zava-bitan'ny tranokalanao sy ireo mari-pamantarana fototra amin'ny fampisehoana izay mamelona ny fitomboan'ny orinasanao, toy ny vidin'ny fiovam-pividianana, ny isan'ny mpitsidika, ny pejy mitsidika matetika, sns sns. miaraka amin'ny fanampian'ny fitaovana an-tranonkala mifandraika dia afaka manitatra ny data-nao ianao hahatratraranao ny tanjonao.
Inona ny SEO?
SEO dia ny fanafohezana ny Search Engine Optimization, ary ny fanatsarana hatrany ny kalitao sy ny haben'ny fivezivezena mankany amin'ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny valin'ny fikarohana fikarohana organik. Rehefa nametraka oniversite an-tserasera ho an'ny orinasanao ianao dia mila manamboatra atiny mahaliana sy mahafinaritra izay manintona, mankafy ary mandresy lahatra ny mpihaino anao hiara-miasa amin'ny marika. Miaraka amin'ny fahalalana sy ny fampiharana tsara ny fampiharana tsara indrindra SEO, afaka mamorona votoaty kalitao izay miakatra avo amin'ny pejy valin'ny fikarohana fikarohana (SERPs) ianao ary mahasarika ny mpitsidika ny tranokalanao. Arakaraka ny ananan'ireo mpitsidika anao ao amin'ny tranonkalanao dia manararaotra ny handresena olona bebe kokoa ho tonga mpanjifanao ianao.
Ity misy ohatra iray amin'ny hoe ahoana ny momba ny lahatsoratra SEO avo lenta amin'ny SERPs, ary tokony ho tanjon'ny orinasan-dry zareo mba hanana toerana ambony ho an'ny teny manan-danja ao amin'ny sehatry ny asa.
Mitombo ny laharana avo noho ny mpifaninana aminao ary mampiasà mpanjifa amin'ny alàlan'ny fampiasana teny fanalahidy lava lava. Ny votoatiny avo lenta sy mirakitra avo lenta dia manome sisiny rehefa mikaroka ny votoatiny izay mamaha ny olan'izy ireo ny mpanjifa sy ny antenaina.
Fa maninona no mifidy Semalt?
Fantatray ny maha-zava-dehibe ny fisian'ny orinasam-pifandraisana an-tserasera amin'ny fototry ny mpanjifanao ary, ny tena zava-dehibe amin'ny faritra ambany. Rehefa miara-miasa aminay izahay, manome toky anao izahay fa na inona na inona zava-dratsy niainanao tamin'ny masoivoho nomerika hafa dia natokan-tena sy nanolo-tena hanova ny fitantarana izahay. Azonao atao ny mandray ny dingana feno fahasahiana anio amin'ny fahazoana mizara tsena sy mpanjifa amin'ny sehatry ny niche anao na manao ahoana na firy na ny haben'ny orinasanao.
Ny matihanina manan-talenta ao amin'ny sisitanao dia miantso 24/7. Tsy sakana ny lavitra. Tsy fiteny sakana koa ny fiteny. Mifandraisa aminay ankehitriny.
Mbola tsy voavaha ihany ve ny fampitomboana ny orinasanao noho ny fanelingelenana ara-bola na zavatra hafa? Manolotra rafitra fihenam-bidy marefo izahay arakaraka ny teti-bolanao. Manolotra anao famporisihana bebe kokoa amin'ny fiaraha-miasa aminay izahay, ary ho faly izahay raha ho tafiditra amin'ny tantaran'ny fahombiazanao amin'ny raharaham-barotra.
Inona ny dikan'ny Semalt?
Semalt dia maso niomerika nomerika feno ataon'ny manam-pahaizana matihanina izay natokana ho an'ny fitomboana tsara sy ny fampandehanana ny tranonkalanao. Miaraka amin'ireo manampahaizana amin'ny lafiny samihafa amin'ny fampitomboana ny fisian'ny raharaham-barotra an-tserasera, dia afaka matoky ianao fa nahazo talenta tsara indrindra azonao mividy vola ianao, na manao ahoana na manao haben'ny teti-bolanao. Nahazo rakotra ny orinasanao izahay. Nahazo tetikasa maro izahay taloha, ary eto ambany ny valiny avy amin'ireo iray amin'ireo mpanjifantsika, faly sy afa-po.
Tsy maninona na firy na firy ny orinasanao, azonao atao ny mandresy ny mpifaninana aminao amin'ny lalao SEO ataony. Jereo fotsiny ireo teny fanalahidy izay mitondra ny fifamoivoizan'ny mpifaninana aminao ary ampiasao amin'ny tranonkalanao manokana, asio azy ireo amin'ny filalaovany manokana. Aza kivy amin'ny tanjonao amin'ny raharaham-barotra.
Inona ny serivisy atolotra Semalt?
Ao amin'ny Semalt, ny tanjontsika voalohany dia ny fampitomboana ny fanatrehanao an-tserasera. Ary isan'andro, dia manolo-tena izahay hanatsara ny orinasanao. Ireto no fomba manan-danja hanampianao anao hahatratra ny tanjon'ny orinasa.
Nandritra ny folo taona lasa, dia nanamboatra ny checker laharana amin'ny teny fanalahidy Semalt izahay ary Mpanadihady momba ny tranonkala hanampy anao:
Hamarino hoe ahoana ny laharan'ny tranonkalanao ao amin'ny SERPs.
Fantaro ireo lesoka momba ny fanatsarana ny pejin'ny tranokalanao.
Jereo ny tranokalan'ny mpifaninana aminao
Manaova tatitra momba ny tranonkala momba ny fanavaozana ary havaozina feno.
Ankoatra ny fanolorana ireo serivisy ireo amin'ny orinasanao, dia manome serivisy serivisy fanandramana tranonkala izay manome antoka anao hahazo ny vokatra tadiavinao ianao. Ny tranonkalanao sy ny votoatinao dia hanana toerana ambony noho ny mpifaninana aminao mandritra ny fotoana fohy indrindra azo atao, dia manapa-kevitra ny hiara-hiasa aminay ianao.
Miaraka amin'ny serivisy momba ny serivisy momba ny tranonkala mahomby, ho vonona amin'ny angon-drakitra ilaina ianao hahatratraranao ny tanjonao. Zahao ny famerenan'ny mpanjifa ny serivisy momba ny serivisy momba ny tranonkala.
Serivisy SEO SEO
Manolotra serivisy SEO ho an'ny mpanjifanay izahay na inona na inona ny teti-bolany na ny haben'ny orinasany. Mahatakatra izahay fa mila serivisy SEO ianao hampitomboana ny fisianao an-tserasera hampitomboana ny mpanjifanao sy hitarika ny fidiram-bolan'ny mpanjifa, noho izany dia namorona fonosana roa samy hafa izahay izay mifanentana amin'ny filànanao.
Afaka mahazo valiny be ianao ao anatin'ny fotoana fohy indrindra azo atao raha mividy ny fonosana AutoSEO anio. Miaraka amin'ny vidin'ny fihenam-bidy mitentina $ 0,99, dia hahazo vola tena ilaina amin'ny serivisy SEO tena ilaina ianao:
Fanatsarana ny fahitana ny tranonkalanao
On-page optimization ny pejy rehetra ao amin'ny tranonkalanao.
Mamorona rafitra fananganana rohy mifandraika amin'ny tranokalanao.
Ny fikarohana ny teny fanalahidy ao amin'ny faritra misy anao
Ny tatitra momba ny tranokala momba ny tranonkala dia manampy anao hametraka ny tanjonao amin'ny raharaham-barotra.
Mirehareha amin'ny tenanay izahay amin'ny fanomezana ny serivisy serivisy mety hitombo. Ity misy fanamarihan'ny mpanjifa nahafa-po momba ny fonosana AutoSEO.
Azonao atao ihany koa ny manomboka ny fitomboan'ny orinasanao ankehitriny amin'ny fonosana AutoSEO. Manome anao izahay ny vola tsara indrindra amin'ny serivisy serivisy Whitehat SEO afaka mividy.
Serivisy feno FullSEO
Miaraka amin'ny fonosantsika FullSEO, ianao dia manome antoka anao ny serivisy Whitehat SEO tsara indrindra, izay hanampy anao hahavita tsara kokoa noho ny mpifaninana aminao amin'ny fotoana tsy misy. Miara miasa aminay anio mba hanome ny orinasanao ny filàna an-tserasera ilaina hampitomboana ny fahatsiarovan'ny marika amin'ny Internet. Ireto misy serivisy teknika mandroso SEO natao indrindra hananganana ny orinasanao:
Ny fananganana tranokala anatiny sy ivelany
Fanitsiana ny tranokala momba ny tranokala
Serivisy fanoratana ny votoaty
Rafitra momba ny fananganana rohy mifampitohy
Taorian'ny tolotra varotra sy serivisy serasera.
Tsy mila manemotra ny fampiasam-bola amin'ny fitomboan'ny orinasanao ianao amin'ny vanim-potoana fandaniana. Antsoy izahay anio hahafantatra bebe kokoa momba ny drafitra fandoavam-bola mora ampiasaina izay manome antoka anao hanomboka amin'ny fampiroboroboana ny lazan'ny marika amin'ny Internet.
Manana matihanina manan-talenta sy efa nanolo-tena izahay izay manana fahaiza-manao amin'ny famoronana horonan-tsary izay mizara izany amin'ny Internet sy ivelany. Ianao koa mila horonantsary mahafaly ary mahasarika ny mpihaino anao hiditra amin'ny orinasanao. Ny ekipa mpamokatra horonantsary dia manana traikefa amin'ny fampiavaka ireo zavatra mahazatra. Mila ny talenta tsara indrindra ianao hampisehoana amin'ny mpanjifa ny fomba mety hanampiany azy ireo ny orinasanao. Ny hany hataonao dia ny fiantsoanay anio, ary handika ny hevitrao amin'ny horonantsary fampiroboroboana mahafinaritra ianao hahazoanao valiny.
Ny tranokalanao, tahaka ny birao ivelan'ny Internet, dia tsy maintsy aorina amin'ny paikady hahasarika ny fifamoivoizana organik. Ianao no mahatakatra fa io lafiny amin'ny orinasanao io dia mety hahafaka na manimba ny orinasanao. Raha izany no izy dia tokony avelanao ny matihanina hiatrehana ny fampandrosoana ny tranonkalanao. Miaraka amin'ny traikefa ananantsika nandritra ny folo taona mahery niatrehana tetikasa maro samihafa, azonao antoka fa tena eo am-pelatanana ny tetikasan'ny tranonkala. Miahy tsara ny orinasanao izahay, ary manolo-tena anao handray ny valim-pifidianana tadiavinao.
Ny lafiny rehetra amin'ny fampandrosoana ny tranonkalanao dia karakarain'ny ekipa matihanina manokana. Avy amin'ny paikady marika hatramin'ny famonoana feno, faly izahay hampahafantatra anao fa nahatratra ny valiny tsara ho an'ny marika ambony eto an-tany. Jereo ireo fijoroana ho vavolombelona avy amin'ireo mpanjifantsika mahatoky ary mifandraisa aminay anio.
Hihaona amin'ny dadanao kely indrindra amin'ny Semalt!
Ny biby fiompinay ao an-trano, Turbo, dia tafiditra ao anatin'ny ekipa hatramin'ny voalohany. Izy dia lasa mpikambana manan-danja amin'ny fianakavian'i Semalt. Tahaka an'i Turbo, mety ho lasa ampahany amin'ny tantaran'ny fahombiazan'ny orinasanao koa ianao. Na eo aza ny dingana momba ny fitomboan'ny orinasanao, dia faly izahay hiara-hiasa aminao hahatratra ny tanjonao.
Mifandraisa aminay ankehitriny. Ny ekipa matihanina matihanina sy nanolo-tena dia faly mamaly ny fanontanianao rehetra momba ny fomba ahafahantsika mampitombo ny fisian'ireo marika anao. Miahy ny sakana fiteny ve ianao? Soa ihany, faly izahay hampahafantatra anao fa ny mpitantana dia miresaka fiteny mahazatra miaraka aminao. Aoka ho sinoa, anglisy, frantsay, italiana, holandey, tiorka sns ... izahay no miteny ny fiteninao. Antsoy anio, ary andao hanombohana hampitomboana ny fisian'ny orinasanao amin'ny Internet.